गैरआवासीय नेपाली दिवस आज बिभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरि मनाइँदै, यस्ता छ एनआरएन दिवसको कार्यक्रम
काठमाडौं । असोज २५ । प्रवाशमा बस्ने नेपालीहरुको साझा संस्था गैरआवासीय नेपाली संघको आज स्थापना दिवस बिभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरि मनाँइदै छ । आठौं महाधिवेशन तथा
काठमाडौं । असोज २५ । अपांगता भएका व्यक्तिलाई केन्द्र र प्रदेशको चुनावमा प्रतिनिधित्व नगराएको बारेमा सर्बोच्च अदालतले सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । राष्ट्रिय
काठमाडौंमा निर्माण व्यवसायी माथी गोली हानेको २४ घण्टा नबित्दै सुन व्यापारीको पनि गोली हानी हत्या, डिस्टीलरीको गार्डमाथी पनि गोली प्रहार, अपाराधीक गिरोह फेरी सक्रिय,
काठमाडौं । असोज २५ । काठमाडौंमा आपराधीका गिरोहले र्निमाण व्यवसायी शरद गौचनको गोली हानी हत्या भएको चौविस घण्टा नबित्दै अर्का सुन व्यापारीको गोली हानी हत्या गरिएको
सटिङ सुटिङको कपडामा अरबौ लुट, सरकारी निकाय बेखबर
काठमाडौ, २४ असोज । नेपालीहरुले लगाउने कपडामा स्वदेशमा बनेको भन्दा धेरै विदेशमा बनेको कपडा प्रयोग हुने गरेको छ । हरेक वर्ष कति परिमाणमा कपडा आयात हुन्छ भन्ने
धादिङमा बस दुर्घटनामा एकको मृत्यु ५४ यात्रु घाईते
धादिङ । धादिङको सदरमुकाम नजिकै मंगलबार दिउँसो भएको बस दुर्घटनामा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने ५४ यात्रु घाईते भएका छन । ज्यान गुमाउनेमा गंगागजमुना गाँउपालीका वडा
संस्थान बचाउन केन्द्रलाई खवरदारी गर ः खानेपानी मन्त्रालय सचिव कृष्णराज विसी
पोखरा, २४ असोज । खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयका सचिव कृष्णराज विसीले आफ्ना मातहतका विभाग एवं संस्थानहरुलाई जिम्मेवार बन्न अनुरोध गरेका छन् । मंगलबार नेपाल खानेपानी संस्थान
बाम गठबन्धन सीट बाँडफाँटः माओवादीले ५६ सीट पाउने
काठमाडौं । आशन्न प्रतिनिधिसभाको चुनावमा ६०/४० प्रतिशतको भागवण्डाका लागि सैद्धान्तिक सहमति गरेका एमाले र माओवादी केन्द्रवीच कुन जिल्लामा कति सीट लिने भन्ने रस्साकस्सी सुरु भएको छ
ललितपुर क्षेत्र नं १ बाट नवराज सिलवाल चुनाव लडने
काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) ललितपुरले आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि आफ्ना तर्फबाट उम्मेदवार सिफारिस गरी माथिल्लो कमिटीमा पठाएको छ । जिल्ला कमिटीको बैठकले निर्वाचन क्षेत्र नं
गैरआवासीय नेपाली संघ आइसीसीको उपाध्यक्षमा कतारका नरेन्द्र भाटको उम्मेदवारी घोषणा
काठमाडौं । असोज २३ । गैरआवासीय नेपाली संघ आइसीसीको उपाध्यक्षमा कतारका युवा व्यवसायी नरेन्द्र भाटले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । बैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा २५ लाख बढी नेपालीको
कानुनले अयोग्य ठहर्‍याएका खुमबहादुर पनि उम्मेदवारमा सिफारिस
काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको दाङ जिल्लाले कानुनले नै पाखा लगाएका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउन केन्द्रमा सिफारिस गरेको छ । संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक र
पशुपतिनाथको जग्गा प्रतिरोपनी मासिक आम्दानी ८२ रुपैयाँ !
गोपीकृष्ण ढुंगाना काठमाडौं : काठमाडौं उपत्यकाभित्रको साढे चार हजार रोपनी जग्गाबाट वार्षिक आम्दानी कति होला ? तपाईंले सहजै अनुमान लगाउनुहुनेछ, अर्बौं । तर, आराध्यदेव पशुपतिनाथ मन्दिरका नाममा
हिमालयन ट्राभल मार्टमा अनियमितताः,अख्तियारले फाइल नियन्त्रणमा लियो
काठमाडौं । असोज २३ । मुलुकको पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सरकार र निजी क्षेत्रले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको ‘हिमालयन ट्राभल मार्ट २०१७’ को खर्च विवरण अपारदर्शी भएको भन्दै
सानुकान्छा नेपाल नेपाली काँग्रेसबाट नुवाकोट क्षेत्र नं २ को प्रदेश सभा १ बाट प्रत्यक्षमा नाम सिफारीस, यस्तो छ नेपालको राजनीतिक यात्रा
काठमाडौं । असोज २३ । नुवाकोट निर्वाचन क्षेत्र नं २ प्रदेश सभा १ को प्रत्यक्षमा नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट सानुकान्छा नेपाल सहित १० को नाम सिफारीस भएको
राप्रपाका जिल्ला अध्यक्ष र पुर्व जिबिस सभापति सहित दर्जन बढी नेता काँग्रेसमा प्रवेश
काठमाडौं । आसन्न प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनलाई दृष्टिगत गरि रसुवाका राप्रपा र नयाँ शक्तिका प्रभावशाली व्यक्तिहरु नेपाली काँग्रेसमा प्रवेश गरेका छन् । बालुवाटारमा आयोजित विशेष कार्यक्रमका
कांग्रेस देउवा डडेल्धुराबाट सिफारिस डडेल्धुरा कांग्रेसका दुई समूहले सभापति शेरबहादुर देउवालाई सर्वसम्मत सिफारिस गरेका छन् । देउवा ०४८ देखि नै डडेल्धुराबाट निर्वाचित हुँदै आएका छन् । उनी पहिलो
काठमाडौंमै ३० रोपनी जग्गामा उम्रिएको गाँजाका बोटहरु बालाजु प्रहरीद्धारा फडानी
काठमाडौं । असोज २१ । काठमाडौं उपत्यका भित्रनै ३० रोपनी जग्गामा उम्रिएको गाँजालाई प्रहरीले नष्ट गरिदिएको छ । काठमाण्डौ जिल्ला तारकेश्वर नगरपालिका १ अन्तर्गत उपल्लो गाउँ, कुञ्चिप्वाकल,
काठमाडौं क्षेत्र नं ६ “क” को प्रदेश सभाको प्रत्यक्षमा केदारनाथ पाठकको नाम सिफारीस, यस्ता छन् सिफारीस प्रत्यक्ष र समानुपातीक उम्मेदवार
काठमाडौं । असोज २१ । काठमाडौं क्षेत्र नं ६ क को प्रदेश सभाको प्रत्यक्ष र्निवाचनका लागि नेपाली काँग्रेस टोखा नगरपालीकाका पुर्व सचिब केदारनाथ पाठकको नाम सिफारीस
नेपाली काँग्रेस नुवाकोटले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाका सम्भाबीत उम्मेद्धवारको नाम केन्द्रमा पठायो, यस्ता छ सिफारीस भएका उम्मेद्धवारहरु
रबिन थपलिया । काठमाडौं । असोज २१ । नेपाली काँग्रेस नुवाकोटले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा र्निवाचनका लागि १३९ सम्भावीत उम्मेद्धवारको नाम केन्द्रमा सिफारीस गरेको छ
Date : 07 Oct 2017
नयाँ शक्ति नुवाकोटका संयोजक नेपाली काँग्रेसमा र्फकिंदै
काठमाडौं । असोज २१ । नयाँ शक्ति पार्टी नुवाकोटका संयोजक कृष्ण कुंइकेल नेपाली काँग्रेसमा र्फकिने भएका छन् । एक बर्ष अघि नेपाली काँग्रेसबाट नयाँ शक्ति पार्टीमा
बालाजु प्रहरीका डिएसपी भण्डारी नेतृत्वको प्रहरी टोलीद्धारा ढलमा खसेका व्यक्तिको ८ घण्टा पछि जिवितै उद्धार
काठमाडौं । असोज २१ । टोखाका ढलमा खसेको व्यक्तिको ८ घण्टा पछि प्रहरीले जिवितै उद्धार गरेको छ । तारकेश्वर नगरपालीका वडा नं १ साङलाको छाप भन्ने
तारकेश्वरमा प्रहरी, जनप्रतिनिधि र स्थानीयबासीको अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न, स्थानीयबासीले राखे यस्ता गुनासो
काठमाडौं । असोज २१ । काठमाडौंको तारकेश्वर नगरपालीका १० एश्वर्यनगरमा बालाजु प्रहरी बृत्तका प्रमुख, वडाका वडा अध्यक्ष र स्थानीयबासीबिच आज अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ । अन्तरक्रिया
दरबारमार्ग पसलको प्रहरीले पनि थाल्यो अनुसन्धान
सेलका नाममा लत्ताकपडा, जुत्ता, घडीलगायत सामाग्री ठगी गर्ने दरबारमार्गका व्यवसायीविरुद्ध प्रहरीले पनि अनुसन्धान थालेको छ । आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले व्यवसायीसँग लिएको बयान
यस्तो बन्यो प्रदेश सरकारको खाका
काठमाडौँ । संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिले प्रदेश मन्त्रिपरिषद् तथा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसहित सातवटा मन्त्रालयको खाका तयार पारेको छ ।सामान्य प्रशासनमन्त्री टेकबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा रहेको समितिले झन्डै ढेड
वाम गठबन्धनलाई चुनौती नभई अवसरकोरुपमा लिने नेपाली काँग्रेसको निष्कर्ष
काठमाण्डौ । नेपाली काँग्रेसले वाम गठबन्धनलाई चुनौती नभई अवसरको रुपमा लिने निष्कर्ष निकालेको छ । उस्ले सबै लोकतान्त्रिक शक्तिहरुलाई एक ठाउँमा उभ्याएर संविधान कार्यान्वयनलाई सफल बनाएर
नेपालका ठूला अस्पतालहरुकै आकस्मिक कक्ष मापदण्ड विपरित
रिया भण्डारी काठमाडौँ । अस्पतालको आकस्मिक कक्ष अत्यन्तै गम्भीर र अकस्मात हुने स्वास्थ्य समस्याको लागि गरिएको व्यवस्था हो । तर नेपालका ठूला अस्पतालहरुकै आकस्मिक कक्ष हेर्दा लाग्छ
Pages 564 : You are at page 494 of 564